Yacqub Khayre oo la Tababartay Al-Shabaab
Yacquub Khayre oo ka dambeeyey weerarkii magaalada Melbourne ka dhacay maalintii shalay, ayaa idaacadda VOA ogaatay inuu hadda ka hor la tababartay ururka Al-Shabaab.
Mid ka mid ah ehelleda ninkaasi oo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in Yacquub Khayre uu sannadkii 2006 yimid Soomaaliya kadib markii ay Koonfurta iyo Badhtamaaha waddanka qabsadeen ururkii maxaakiimta oo ay Al-Shababna ku dhex jireen.
Wararka aanu helnay ayaa sheegaya inuu ninkaasi la tababaraty xubno ka tiran urruka Al-Shabab xilligaasi.
Markii ay ciidmada Itoobiya soo galeen islamarkaana ay talada ka tuureen maxaakiimtii, Khayre waxaa la sheegay inuu u safray Kenya kadibna ay qabteen ciidamada amniga kuwaasi oo u gacan geliyey Interpol iyo FBI-da kuwaasi oo iyaguna kusii wareejiyey mas’uuluyiinta Australia.
Ninkaasi waxaa la sheegay inuu waddankaasi Australia tagay isagoo carruur ah sannakdii 1994-kii. Sanadkii 2009 waxaa lala xiray afar qof oo kale waxaana lagu eedeeyey inay doonayeen inay weeraraan saldhig milatari oo ay leeyihiin ciidamada Australia oo ku yaalla Sydney. Dambi argagixiso ah oo lagu soo eedeeyey waa lagu waayey xilligaasi.
Waxaa la sheegay in markaasi kadib la xiray markii uu gaystay falal xatooyo hubaysan ah, laguna xukumay shan sano. Waxaa la sheegay inay is yaqaaneen nin Soomaali ah oo ku biiray ururka Daacish oo lagu magacaabo Sharmarke Jaamac inkastoo aysan caddayn inay si toos ah u wada xiriiri jireen.
Ninkan ayaa shalay toogtay nin ku sugnaa goob Al-beerko ah, waxaana uu la hayste ahaan u qabsaday gabadh. Rasaastii ay is weydaarsadeen ciidanka waxaa ku dhaawacmay saddex ka tirsan booliiska.